14/05/2010 : Lany haika ny menasofina! (+vidéo)
Paik’adin’ny menasofina avokoa ny zava-mitranga ankehitriny. Rehefa tsy nety nanaraka azy ireo ny Afrikana Tatsimo tamin’ny teti-dratsy nokasainy hatao tany Pretoria. Na hatramin’ny fankatoavana hirahirain’ny Tiorkia aza dia asa-tanan’ny frantsay ihany koa. Mila ny fana pian’ity firenena ity ny tiorka hidirany ao anaty ny vondrona Eoropeana koa dia nampiasain’ny Frantsay mangingina Anatahana maneho fa misy Mankato ny FATE eran’izao tontolo izao. Mitsirirritra mafy ny haren’ny Gasikara ny Frantsay satria ao anaty ny OMD dia manakaiky ny farany ity firenena ity ao anaty ny vondrona Eoropeana. Raha ny momba ny fankatoavana dia tsy azo eritreretina ny ahazoan’ny FATE an’izany satria mbola millésima aoa anaty fanapahan-kevitra avy amin’ny ankolafy tokana hatrany ny lehiben’ny mpanongam-panjakana. Efa nanambara izao tontolo izao fa tsy lalana démocratisa izany. « Ny tanjon’ny menasofina » hoy William avy ao amin’ny TEZA « dia ny hijanonan’i TGV eo amin’ny fitondrana mba hanavaozana ny fifanaraham-piaraha-miasa mandritry ny 50 taona manaraka indray ».
13/05/2010 : Mbola mirehareha ihany Rajoelina ( +Vidéo)
« Mbola mirehareha sy tsy manaja Ray aman-dReny ihany ny mpanongam-panjakana » hoy Raveloson Constant raha niresaka momba ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny foza ny tenany. Mampalahelo ny toe-tsaina toy ireny hoy ity mpitari-tolona ity satria maneho ny fanaovana tsinontsinona ny mpiray tanindrazana rehetra. « Tsy misy fahendrena sy fifanarahana azo antenaina amin'io mpanongam-panjakana io » hoy Constant. Nambarany fa « amin »ny maha-mpiray tanindrazana dia mbola manantena ihany ny tenany fa hibitsika amin'i TGV ny fanahy Masina ka hampiseho fihetsika feno fahendrena ny tenany ary tsy hitondra irery ny tetezamita ».
12/05/2010 : ITW Député Raharisaina Hery
Fifidianana tandrametaka ; fihemorana sesilany ; governemanta tsy mety teraka ; fankatoavana iraisam-pirenena. Mitondra fanazavana ombam-panehoan-kevitra ny solombavam-bahoakan’ny Vohemar. Nambaran’ny Depiote Hery fa tsy maintsy mahazo ny fankatoavan’ny Malagasy rehetra ny mpitondra vao eken’izao tontolo izao.
29 Avril 2009 - 29 Avril 2010 : Efa nivonona tamin’ny fisamborana izahay ! (+vidéos : ITW MANANDAFY, ITW IHANTA)
Anisan’ny nanamarika ny dia tany Prétoria-Afrika Atsimo, ny nahatsiarovana ny herintaona nisamboran’ny FIS an ‘i Manandafy Rakotonirina sy Ihanta Randriamnandranto ary ireo mpiara-miasa taminy tao amin’ny Hôtel Carlton.
Herintaona aoriana mijoro vavolombelona Manandafy Rakotonirina sy Ihanta Randriamandranto. Milazalaza ny tohin’ny fanadihadiana, ary mampifandray izany amin’ny toe-draharaha politika amin’izao fotoana.
03/04/2010 : En exclusivité : Jean Louis Rakotoamboa « tsy ho ela dia hiongana io fitondrana tsy arà-dalana io » (+ Audio)
Hentitra ny filoha nasionalin’ny antoko TEZA mikasika ny fiainam-pirenena amin’izao. «Zava-doza no miandry ny firenena amin’izao, efa tsy misy raha manjary intsony eto Madagasikara, didin’ny be sandry eto ». Tsy misy vahoaka miaraka amin’ny FATE intsony fa ireo manana basy sisa no momba azy. Etsy an-danin’izay dia misoko mangina ny hetsika avy amin’ny ankolafy Ravalomanana. Na tsy mahazo alalana haneho hevitra aza dia efa misy ny paik’ady entina hamerenana ny fanjakana ara-dàlana eto amin’ny firenena. Mazava ny fanehoan-kevitra avy amin’i Jean Louis Rakotoamboa “raha mitohy izao toe-draharaha izao dia tsy maintsy ho tonga amin’ny fanonganana an’ i TGV ny vahoaka”.